७ दिनमै शरिरका मुसा, कोठि गायब गर्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय………. – Ramailo Sandesh
७ दिनमै शरिरका मुसा, कोठि गायब गर्न अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपाय……….
मुसालाई अंग्रेजीमा वर्त् भनिन्छ । एजपीभी भन्ने एक किसिमको भाइरसको कारण यो छालामा मुसा पैदा हुने गर्दछ । मुसा विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । औषधि खाने र औषधि दल्ने गरेमा मुसा सानो हुंदै गएर अन्तमा हट्नेछ । यस उपचार पद्धति बाहेक , चिस्याउने , इलेक्ट्रिक उपचार गर्ने , लेजर वा अपरेशन गर्ने तरिकाव्दारा पनि मुसा हटाउन सकिन्छ।
भर्खरै शरीरमा मुसा आएको देख्दा भिटामीन एलाई सोझै मुसा आएको छालामा दल्न सकिन्छ । यसो गरेमा मुसा हट्ने सम्भावना हुन्छ । अर्को उपाय होः भिटामिन सीलाई धुलो पारी पानीसंग मिलाएर लेदो जस्तो बनाई मुसा आएको छालामा दल्ने गरेमा मुसा हट्ने सम्भावना छ । तर जुनसुकै उपायव्दारा मुसा हटाउंदा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार काम गर्न राम्रोहुन्छ ।मुसा कोठी हटाउनका लागि घरेलु उपायहरु: